China Glass Scale CW269 Famokarana sy Orinasa | AOLGA
4 * bateria AA
ABS + vera marefo
Fampisehoana LED tsy hita maso
4 sensor sensitive avo
Famonoana / famonoana mandeha ho azy ny manan-tsaina
Velarana mavesatra mifangaro
Mavesatra maivana, matevina ary tsotra
Famolavolana fisehoana endrika maha-olona
30CM * 30CM Sehatra goavam-be feno hatezerana 30CM, ahazoana aina tsara hijoroana milanja, ary mety ho an'ny ankamaroan'ny olona manana habe amin'ny tongotra samy hafa izy.
Fototra feno rakotra
Fototra feno fonosana ABS feno dia rafitra mendrika sy avo lenta.
Ny sensor 4 avo lenta amin'ny tongony mizana dia mitondra hadisoana avo lenta sy kely.
Fampisehoana LED tsy hita maso eny ambonin'ny faritra, ary tsy misy jiro LED hita rehefa tsy ampiasaina ary hiseho ny LED rehefa milanja azy ianao, izay mahatonga azy io hadio kokoa. Raha ny mahazatra, ny mizana fotsy dia misy LED fotsy raha ny mizana mainty kosa miaraka amin'ny LED mena.
Fametrahana mazava tsara mizana mizana:
Ny vera iray vera dia azo tsapain-tanana amin'ny 10g fotsiny.
Chip mahomby avo lenta:
Fandehanana haingam-pandeha, tsy misy fiandrasana, fampisehoana mahomby kokoa.
Misy jiro mazava sy malefaka ihany koa amin'ny alina
Izy io dia ampifandraisina amin'ny mizana raha tsy misy fampiasana, ary ny famakiana dia aseho mazava rehefa milanja.
Fampisehoana LED miafina, famakiana mazava andro aman'alina.
Switch switch mandeha ho azy ON / OFF:
Ny famadihana mandeha ho azy ON / OFF dia mamela ny famolavolana switch manual ary novaina ho sensor gravity marani-tsaina, izay mety sy mitsitsy angovo.
Velarana mavesatra mifangaro:
Hatsaran-tarehy vita tsara, sehatra lehibe, milanja kokoa milanja kokoa.
Maivana, matevina ary tsotra:
Raha tsy misy fisehoana be dia be dia azo tazonina mora foana ny vatana mahia.
Azo tehirizina mora foana amin'ny sisiny rehetra, tsotra sy tsara tarehy.
Ny firafitry ny teboka efatra sy ny fifandraisana amin'ny karazana tetezana dia manome hery bebe kokoa.
Famolavolana endrika endrika maha-olona:
1. Zoro boribory lehibe vita tanana, malama sy marefo, mampihena ny fahasimban'ny fifandonana.
2. Pads an'ny tongotra manohitra ny slip sy ny tongotra mavesatra ambany-gravity dia mampiorina azy io ary manohitra ny skid mba hanana fiarovana roa sosona. Ireo singa fototra dia voaaro amin'ny androm-piainana lava kokoa.
3. Fitaovana polymer eo ambany.
Volavola iray, porofo vovoka ary porofo hamandoana mba hiarovana ireo singa fototra
Fitaovana voafantina hahazoana antoka fa avo lenta:
Ny vera vita amin'ny biriky matevina dia misy fiatraikany tsara sy fanoherana avo lenta.
Voasandoka tsara ny sehatra mizana, ary nohavaozina ny traikefa kalitao
Sehatra elektronika miaraka amin'ny Platform Glass
Mainty / fotsy
Fampisehoana LED tsy hita maso, avo lenta: 100G-180KG, milanja mandeha ho azy & fanakatonana mandeha ho azy,
Hery ambany sy haingana be loatra
41.5V bateria AAA
Teo aloha: Ny lanjan'ny lanjan'ny herinaratra mandeha ho azy B1710
Manaraka: Masinina kafe AC-513K
Mandanja mandeha ho azy
Mizana mavesatra maimaim-poana
Mizana mavesatra matihanina
Mizana mavesatra kely
Mizana fandrefesana lanja
Mizana mavesatra ho an'ny vehivavy
Mizana mavesatra izay refesina amin'ny tavy amin'ny vatana
Miserana varavarana hotely vera ...
Herinaratra tampoka W ...